Cathay Pacific inodzima ndege mushure mekunge vashandi varamba mitemo mitsva yekuvharirwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Cathay Pacific inodzima ndege mushure mekunge vashandi varamba mitemo mitsva yekuvharirwa
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Hong Kong Kupwanya Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Cathay Pacific yakamanikidzwa kumisa dzimwe dzendege dzevafambi kuenda kuHong Kong mushure mekunge vazhinji vevashandi vayo varamba kutevedzera mitemo yekuvharirwa kwevatakuri.
As Hong Kong iri kutevera zano re 'COVID-zero' mukusundidzira kuvhurazve muganho wayo neChina, imwe yendege huru dzeAsia uye inotakura imba yeHong Kong, Cathay Pacific yanga ichishuvira kubatsira vakuru veguta nekufamba uku.
Cathay Pacific yakakumbira vashandi vayo vepakabhini nevatyairi vendege kuti vazvipire kune 'yakavharwa-loop' system muna Zvita. Izvi zvaisanganisira kushanda kwevhiki nhatu dzakatevedzana, kugara mukati Hong Kong kwenguva pfupi chete, vasati vavharirwa kwemavhiki maviri pakudzoka kwavo.
Zvakadaro, kambani iyi inoita kunge yanga iine vashoma vazvipiri vekushandisa chirongwa ichi sezvo vazhinji vachida kuve kumba paKisimusi.
Cathay Pacific yakamanikidzwa kukanzura dzimwe dzendege dzevafambi kuenda Hong Kong mushure mekunge vazhinji vevashandi vayo vakaramba kutevedzera mitemo yekuvharirwa kwemutakuri.
Nekuda kwekushomeka kwevashandi, Cathay Pacific yakamanikidzwa kushandura chikamu chimwe muzvitatu chendege dzayo kune zvinotakura zvinhu panzvimbo pekutakura vanhu.
"Zvirambidzo zvekushanda uye zvekufamba zvakasara zviripo zvinoramba zvichitimanikidza kushandisa ndege sezvatakaronga. Tiri kubatanidza purogiramu yedu yendege yevatakuri yaZvita 2021, kusanganisira kumisa nhamba dzendege kuenda Hong Kong," mutauriri weCathay Pacific akadaro.
Nendege icharonga kumwe kubhuka pandege dzevafambi dzasara kuti dzipe vatengi vane ndege dzakamiswa.
Kunyangwe mirau yeHong Kong yekuvharirwa kwevanhu, nyaya dzeCCIDID-19 dzinoramba dzichiuya, nevatyairi vatatu veCathay Pacific vatyairi vekutakura zvinhu nguva pfupi yadarika vakaongororwa kuti vane hutachiwana mushure mekusvika kubva kuFrankfurt.
Mhosva mbiri dzeiyo nyowani yekumaodzanyemba kweAfrica COVID-19 musiyano, iyo yakatoita kuti nyika dzinoverengeka dzeEU dzitangezve zvirambidzo zvekufamba, dzawanikwawo muvafambi vakavharirwa, Dhipatimendi rehutano reHong Kong rakazivisa neChishanu.